काठमाडौं – मःम काठमाडौंमा अधिकांशले रुचाउने खाजा हो । धेरैजसो खाजा पसलमा मःम पाइन्छ तर वसन्तपुर दरबार नजिकै रहेको एउटा खाजा पसलमा पाइने मःमको विशेष पहिचान छ ।
अधिकांश ठाउँमा १ प्लेट बफ मःमको ९० रुपैयाँ पर्छ, चिकेनको १४० र भेजको ८० रुपैयाँ तर वसन्तपुर दरबार नजिकैको यट्खामा मःम पसलमा ३० रुपैयाँमा नै १ प्लेट मःम पाइन्छ ।
यट्खामा मःम पसलमा बफ मःम पाइन्छ । टमाटरको अचार र खुर्सानीको चट्नी मःमसँगै पाइन्छ । काठमाडौं जस्तो महंगो शहरमा ३० रुपैयाँँमा नै १ प्लेट मःम बेच्न कसरी सम्भव भयो ?
‘पारिवारिक सहयोग विना केही कुरा सम्भव छैन र परिवार मिल्यो भने असम्भव पनि केही छैन,’ मःम पसले राकेश बलामीले भने । उनले मःम पसलमा कामदार राखेका छैनन्, घरकै मान्छेले मःम पसलको काम चलाउँछन् ।
‘बाहिरी कामदार नराखेकाले तलब खर्च बचाउँदा सस्तोमै मःम बेच्न सकिन्छ,’ उनले रहस्य खुलाए, ‘अन्य पसलमा कामदार राखेका हुन्छन्, कामदारलाई तलब खुवाउनुपर्छ, त्यसैले महंगो हुन्छ ।’
राकेशका बुवा बुद्धिबहादुर ५० वर्षअघि मकवानपुरको चित्लाङबाट काठमाडौं आएर होटलमा काम गर्थे । भागेर काठमाडौं आएका उनका बुुवाले होटलमा काम गर्दै कुकको काम पनि पनि सिके । परिवारका सबै सदस्य मिलेर १२ वर्षअघि मःम पसल खोलेका थिए ।
‘आजभन्दा १२ वर्षअघि ३ रुपैयाँमा मःम बेच्थ्यौं,’ विगत सम्झँदै बलामीले भने । पीठो र मासु महंगो भएसँगै मःमको मूल्य बढ्दै गएर अहिले १ प्लेटको ३० रुपैयाँ पुगेको छ ।
‘फाइदा–घाटाको कुरा नै नगर्नुस् न ! मःम बेचेर खान बस्नलाई पुगेको छ,’ बलामीले भने । पसलमा १ बजेभन्दा अगाडि नै मःमका लागि किमा बनाएर राख्ने गरिन्छ । १ बजेपछि मात्र पसलमा मःम पकाउने चहलपहल शुरू हुन्छ । ‘हामी बुवालाई पकाउन सघाउँछौ । उहाँले ग्राहकलाई मःम निकालेर दिनुहुन्छ,’ राकेशले भने ।
पसलको मासिक भाडा ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको उनले बताए । ‘धेरै त हुन्न, मःम बेचेर दैनिक ५–६ हजार रुपैयाँ कमाउने गरेका छौं,’ बलामीले भने, ‘अचार, मासु, पीठो र मरमसला किन्नु परिहाल्यो, ३० रुपैयाँमा मःम बेचेर कति नै नाफा हुन्छ र ?’
काठमाडौँ महानगरका सबै वडा कार्यालय भवन नयाँ बन्ने